Wasiir Juxa oo shir looga hadlayo arrimo ku saabsan Soomaaliya uga qeybgalay dalka Finland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiir Juxa oo shir looga hadlayo arrimo ku saabsan Soomaaliya uga qeybgalay dalka Finland
October 2, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiir Juxa oo shirka ka hadlaya gudaha magaalada Helsinki. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warbaahinta Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Helsinki-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid oo loo yaqaan Juxa ayaa shir uga qwybgalay magaalada Helsinki ee dalka Finland, sida uu sheegay xafiiska warbaahinta ee wasiirka.
Shirka ayaa diirada lagu saaray dib-u-heshiisiinta, federaalka, arrimaha amniga gudaha, taakulaynta iyo tayaynta ciidanka qalabka sida, waxbarashada, arrimaha xuquuqul insaanka iyo haweenka.
Kulanka ayaa wasiirka waxaa kala qeybgalay Wasiirka Gaashaandhiga, Wasiirka Waxbarashada iyo Wasiirka Haweenka iyo Xuququl Insaanka.
July 29, 2017 Diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeyn ka geystay deegaano kuyaala gobolka Gedo